CURRENT HEALTH ARTS SOSO-KEVITRA hafa Cinema efaha amin'ny isam- FIALAM-BOLY
Fantatrao tsara fa ny tambajotra sosialy dia fitaovana ilaina amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao fa nariana ianao? Aza manahy fa hanazava anao amin'ny tantara Instagram / Facebook malaza izahay amin'ny ...
Ny fitarihana vehivavy: Elizabeth Tchoungui sa fahaterahana indray ao anatin'ny orana "voasary"? - ...
Mba hamaritana azy dia milaza izahay fa izy no vehivavy voalohany nanolotra ny fahitalavitra fahitalavitra TV5 Monde na ny vehivavy voalohany nanolotra ny gazety ara-kolontsaina Avant-premieres ao amin'ny France 2. Fa i Elizabeth Tchoungui - ''…
Seranana, lozisialy… Ao Dijbouti, ho tapitra tsy ho ela ve ny faran'ny fampandrosoana "kendrena hipetraka"? - Afrika tanora
Raha nanao fampiasam-bola goavana i Djibouti hanamafisana ny andraikiny amin'ny maha foibe isam-paritra azy, dia mbola tsy mizarazara ny toekareny, mitazona ny tsy fananan'asa sy ny fahantrana amin'ny ambaratonga avo.
Azo zahana ao amin'ny MTN Kamerona ny tahiry data an'ireo mitady asa FNE…
(Orinasa any Kamerona) - Ny mpandraharaha ny fifandraisan-davitra MTN Cameroon sy ny National Employment Fund (FNE) dia nanao sonia ny fiandohan'ny volana oktobra tany Douala, fifanarahana fiaraha-miasa…
Aliko Dangote, mpilatsaka an-tsitrapo nizeriana, harena voalohany atsy Afrika
Ilay lahatsoratra Aliko Dangote, miliarderianina Nizeriana, mpanamboatra harena ambony eto Afrika est apparu en premier sur Je Wanda. Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny ...
M-Pesa: fahagagana inona no hahombiazana ivelan'ny Kenya? - Afrika tanora
Raha toa ka nahangona lesoka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny sehatry ny serivisy ara-bola, ny hegemony ao an-toerana dia manome azy ny fikajiana handinika indray ny paikadiny amin'ny fahitana fahombiazana maharitra ivelan'ny tobiny.
Manomboka amin'ny 500 franc ka hatramin'ny 440 miliara francs - Ny tsiambaratelon'ny Cosmas Maduka
Ilay lahatsoratra Avy amin'ny 500 franc ka hatramin'ny 440 miliara franc - Ny tsiambaratelon'ny Cosmas Maduka est apparu en premier sur Je Wanda. Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny ...
Ny dikan'ny fifanarahana Stripe-Paystack ho an'ny fintech Nizeriana - Jeune Afrique
Lagos, Nizeria. © Sunday Alamba / AP / SIPA Ny fandidiana tombanana amin'ny 200 tapitrisa dolara dia manome fahitana iraisam-pirenena ny ekosistia Nizeriana...
Benoît Galichet, CEO CIMENCAM: ny lehilahy tompon'andraikitra? - CEO CAMEROON
TELES RELAY Oct 16, 2020 0
Ny fanendrena azy tao amin'ny lohan'ny orinasa CIMENCAM (Cimenteries du Cameroun) tamin'ny volana jolay 2018 dia niteraka fikolokoloana nify teo amin'ny sasany, nizara elanelana teo amin'ny fanampiana sy ny fisalasalana. Toe-javatra iray izay nanararaotra soa aman-tsara ny ...
WTO: iza avy ireo mpanohana afrikana an'i Ngozi Okonjo-Iweala? - Afrika tanora
Ngozi Okonjo-Iweala, avy eo minisitry ny Toekarena sy ny vola. Tao amin'ny Forum momba ny fiaraha-miasa eo amin'i Afrika sy i Frantsa any Bercy ny 06 febroary 2015 © Bruno Levy ho an'ny JA ...